Liverpool Oo Loo Cummaaday Horyaalka Iyo Man.United Oo Iska Xaadirisay Koobka Carabao Cup | Aftahan News
Liverpool Oo Loo Cummaaday Horyaalka Iyo Man.United Oo Iska Xaadirisay Koobka Carabao Cup
Liverpool ayaa 19 dhibcood oo nadiif ah ku qabatay hogaanka horyaalka Premier League ka dib markii ay 2-0 ku dubteen kooxda West Ham oo marti loo ahaa, waxayna kaabiga ku hayaan in loo caleemo saaro koobka horyaalka.
Reds ayaa rikoodh cajiib ah u yaalay tan iyo 125 sannadood ka hor jabisay caawa iyagoo kawada badiyay dhamaan 19kii kooxood ee ay isku arkeen horyaalka xilli ciyaareedkan. West Ham ayaa aheyd kooxda kaliya ee u hadhsaneyd inay ka badiyaan madaama uu kulankoodii u baaqday Club World Cup.
Sidoo kale, Manchester City ayaa iska xaadirisay finalka koobka Carabao Cup inkastoo ay guuldarro 1-0 ka soo gaadhay Manchester United lugtii labaad ee semi-finalka, laakiin madaama ay 3-1 ku soo badiyeen lugtii hore ee Old Trafford, Man City ayaa finalka ugu soo baxday guul wadareed 3-2 ah.
Goolka qura ee Manchester United ay ku badisay kulankii caawa waxaa dhaliyay Nemanja Matic kaasoo casaan qaatay qeybtii labaad, waana xiddigii ugu horeeyay ee sidaasi sameeya ee Man United tan iyo Wayne Rooney oo gooldhalin iyo casaan isku darsaday kulan ay ka horyimaadeen West Ham sannadkii 2014.